Muungaab oo bilaabay inuu xilka ka qaado qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka Banaadir – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
22nd March 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir, Jen. Xasan Maxamed Nuur (Muungaab) ayaa bilaabay isbedel xagga maamulka degmooyinka, wuxuuna xilka ka qaaday gudoomiyihii ugu horreeyey, iyadoo booskaas uu maanta la wareegay gudoomiye cusub oo uu Muungaab nagacaabay.
Gudoomiyihii hore ee degmada Shibis, Daa’uud Cabdule Maxamed ayaa xilka laga qaaday, waxaana xilkaas loo magacaabay gudoomiye cusub, kaasoo lagu magacaaabo C/fataax Nuur Cali.
Gudoomiyaha cusub ayaa maanta xilka kala wareegay Gudoomiyihii hore, kadib munaasabad ka dhacday xarunta degmada Shibis oo ay ka soo qeyb galeen Mas’uuliyiin, saraakiil ciidan iyo qeybaha bulshada.
Munaasabadan ayaa waxaa hadal ka jeediyay Gudoomiyihii hore ee degmada Shibis Mr Daa’uud oo sheegay in degmada ay ka qabteen arrimo badan mudadii xilka uu hayay, gaar ahaan waxbarashada, nadaafada iyo arrimaha bulshada.
Waxaa uu sheegay inay ku guuleysteen inay xarunta degmada dayactiraan, isagoo xusay inay dib u dhis ku sameeyeen dugsigii shibis.
Gudoomiyaha cusub ee degmada Shibis C/fataax Nuur Cali ayaa sheegay inuu muhiimada koowaad siinayo amniga degmada, waxbarashada iyo isku xirka bulshada, waxaana uu sheegay inuu wada shaqeyn wanaagsan uu la yeelanayo laamaha amniga degmada iyo bulshada.
Iimaan Nuur Iikar Gudoomiye kuxigeenka Gobolka Banaadir ee dhinaca arrimaha bulshada ayaa ku ammaanay Gudoomiyihii hore ee degmada inuu wax wanaagsan qabtay, isagoo kula dar daarmay Gudoomiyaha cusub inuu la yimaado waxqabad wanaagsan.
Gudoomiyaha cusub ee degmada Shibis ayaa ka mid ah dhallinyarada sanadahan dhow Jaamcadaha uga soo baxay dalka Sudan, wuxuuna sidoo kale ka mid ahaa saraakiishii xagga amaanka u qaabilsanaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) oo aan meesha ka saarin in la bedeli karo qaar ka mid ah gudoomiyasha gobolka Banaadir ayaa balan qaaday in maamulkiisa xooga saari doono amniga caasimada, isla markaana degmo walba uu ka xoojin doono isku xirka bulshada iyo laamaha amniga.
Madaxweyne Xasan: Maalin walba goobo muhiim ah ayaa laga saaraa Alshabaab